Xiaomi na-akwadebe ọdịda na: United Kingdom, Ireland, Austria, Denmark, Italy na Sweden | Akụkọ akụrụngwa
Kemgbe ọ malitere na Spain, nnukwu Xiaomi na-aga n'ihu iji guzobe Europe ndị ọzọ. N'okwu a, emepụtara nkwekọrịta ahụ na onye ọrụ atọ, nke bụ nke Hutchison Group, ọha na eze. Nkwekorita a kwuputara na awa ole na ole gara aga, ị nwere ike ịgụ ya onye ọrụ ahụ ga - amalite ire Xiaomi ọnụ na UK.
Na mgbakwunye na ọkwa ahụ n'onwe ya, ụbọchị ole na ole gara aga, anyị mụtara na Xiaomi enweela ụbọchị na ụbọchị maka nke mbụ nke ụlọ ahịa gọọmentị ya na mpụga mba anyị, na nke a ọ bụ oge nke Milan. Mana enweghị obi ụtọ na ya, na Xiaomi ha chọrọ ịgbasa azụmahịa ha n'ụzọ dị ike na kọntinent ochie ma ụlọ ahịa na nkwekọrịta gọọmentị ga-agbakwunye iji ree ngwaahịa ha: Ireland, Austria, Denmark na Sweden.
Maka ugbu a, ndị ọrụ ahụ nọ na United Kingdom, na-achọ ịzụrụ Xiaomi nwere ike inwe obi ụtọ ebe ọ bụ na ha ga-abịa n'oge na-adịghị anya. Ndị ọrụ ahụ bụ akaụntụ na-echere na Xiaomi na eziokwu bụ na obere uru oke nke ngwaọrụ ha nyere na-aga n'ihu na-enweghị mmasị na ndị ọrụ ahụ, ndị opekata mpe na Spain na-aga n'ihu na-ahọrọ Huawei ma ọ bụ ụdị ndị yiri ya iji nye ndị ahịa ha.
N'ikpeazụ, e meelarị nzọụkwụ ahụ ma ugbu a, nnukwu ndị China ga-enwe ndidi iji kparịta ụdị nkwekọrịta a na ndị na-arụ ọrụ ma were usoro ikpeazụ ha hapụrụ. Na Spain ọ na-abawanye na ahịa mgbe ọ rutere nso nso a na ụwa niile ọ bụ n'etiti ndị mbụ na ndepụta, ndị ọrụ ahụ kwesịrị ịbata n'ime egwu ha ji n’aka na ha ga-enwetakwu ndị ahịa.
Mgbasa zuru ezu agaghị ezu ezu ruo mgbe ha ruru United States, mana nke a ugbu a ma hụ ọkwa nke ha nwere n'ihu ụlọ ọrụ dịka Huawei na ZTE fọrọ nke nta ka amachibido iwu na mba ahụ, o yiri ka ọ bụ ezigbo nsogbu iji nọgide na-enwe ọganihu. N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ike na ka oge na-aga ihe ga-dajụọ na United States na ụlọ ọrụ ndị a nwere ike ịdata na mba ahụ, mana Taa anyị nwere ike ịsị na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ka nke a mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Xiaomi na-akwadebe ọdịda na: United Kingdom, Ireland, Austria, Denmark, Italy na Sweden